War Deg Deg:- Dabley Hubeysan oo gaari ku qafaashay duleedka Lamu, kadibna sii daayay markii ay Ashahaateen - iftineducation.com
War Deg Deg:- Dabley Hubeysan oo gaari ku qafaashay duleedka Lamu, kadibna sii daayay markii ay Ashahaateen
iftineducation.com – Dabley hubeysan oo la rumeysan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe ee shalay weeraray Gaari dadweyne ay la socdeen, kaasoo marayay duleedka magaalada Lamu ee Gobolka Xeebta Kenya.
Bishii hore ayay aheyd markii Al-Shabaab ay sheegatay weerar lagu qaaday dad saarnaa gaari bas ah, iyadoo dadkii rakaabka ahaa u kala socday Muslim iyo kuwo aan muslim aheyn, waxaana la dilay ilaa 28 ruux.
Sidoo kale 36 ruux oo ahaa dadka dhagxaanta ka qoda duleedka magaalada Mandhera ayaa isla bishii hore la dilay, iyadoo weeraradan ay dhaliyeen in dadka aan muslimka aheydn ee Kenyanka ku sugnaa Mandhera iyo hareeraheeda inay isaga cararaan.
Al-Shabaab ayaa xoojisay weerarada ay ka geysaneysay gudaha Kenya, waxayna weerarada sababeen inuu faraha ka baxo ammaanka Gobolka waqooyi Bari Kenya.
Somaliya iyo Somaliland oo ku heshiiyay dhowr qodobo, iyadoo bisha soo socoto ay ku kulmi doonaan Magaalada Istanbul